[Okubalulekile] Izaziso Nezicelo Ezivakashelwa (Ezihlobene Nezifo Ezithathelwanayo ZeCoronavirus) | I-Ota Bunkanomori
[Okubalulekile] Izaziso nezicelo kuzo zonke izivakashi (ezihlobene nokutheleleka okusha kwe-coronavirus)
202003 / 01(Izinsuku)
Ezikhungweni eziphethwe futhi eziqhutshwa yi-Ota Ward Cultural Promotion Association (Ota Ward Plaza, Ota Ward Hall Aplico, Ota Bunkanomori), uMnyango Wezempilo, Ezabasebenzi kanye Nezenhlalakahle kanye ne-Ota Ward basabalalisa imininingwane ngokutheleleka okusha kwe-coronavirus. Ngesikhathi bezama ukuqoqa imininingwane yakamuva, sibhekisisa ukuvimbela ukutheleleka nokusabalalisa ukuvimbela, futhi sithathe izinyathelo ezilandelayo.
Sicela ukuqonda kwakho nokubambisana ukuze uvikele impilo yazo zonke izivakashi futhi uvimbele ukwanda kwezifo.
Imizamo yokuvimbela ukutheleleka
Ukuhlikihla utshwala kufakwa ezingxenyeni ezahlukahlukene zesakhiwo, futhi kufakwa insipho engamanzi egumbini ngalinye lokuwasha.Sicela usebenzise njengokufanele.
Ngaphakathi kwesakhiwo sisebenzisa ukubulala amagciwane kaningi nsuku zonke sisebenzisa izixube.
Kubasebenzi abahlangana namakhasimende, sizogqoka imaski yokuqondisa nokuphendula.
Iphosta lokukhanyiselwa mayelana nokugeza izandla nokukhwehlela kuthunyelwe ehholo.
Uma unesifo esifana namakhaza, sicela uyeke ukuvakashela umnyuziyamu.
Sicela nibambisane ekugqokeni imaski ngangokunokwenzeka ehholo.
Uma ukhwehlela noma uthimula, sicela ubambisane ne- "etiquette etiquette" emboza umlomo wakho ngesifihla-buso, iduku, izicubu, ingaphakathi lejakhethi nemikhono yakho.
Indlela elungile yokugeza izandla
Mayelana nokuziphatha kokukhwehlela
Mayelana nokubamba ukusebenza, njll.
Eminye yemidlalo ebisingathwa yiNhlangano ikhanseliwe noma yahlehliswa.Ngokuya ngempendulo nemiyalo yezwe ne-Ota Ward, ukusebenza okungakhanselwa noma ukuhlehliswa kungenzeka esikhathini esizayo.Sizokugcina unolwazi ngesimo sakamuva kuwebhusayithi yethu naku-akhawunti esemthethweni ye-Twitter, ngakho-ke sicela uhlole ukuthi uhlela ukusivakashela yini.
Imisebenzi nezingqungquthela ezibanjelwe esikhungweni ngasinye kuboniswa ngangokunokwenzeka ekhasini lasekhaya lenhlangano elithi "XNUMX Building Event Calendar", kodwa ngicela ubheke umhleli ngamunye ukuthola ukwaziswa kwamuva.